Suuq geynta ayaa mideeya xooggaaga iibka iyo kooxaha suuqgeynta. Waxay diirada saareysaa isku waafajinta yoolalka iyo himilooyinka ku xeeran yoolalka dakhliga guud. Markaad isu keento labadan koox ee xirfadlayaasha ah, waad ku guuleysan doontaa:
Markaad haysatid qaab ganacsi oo macaamiil udub dhexaad u ah, badanaa waxaad horeyba ugu jirtay wadada istiraatiijiyad guuleysata. Waa inaadan diiradda saarin waxa iibkaaga iyo kooxaha suuqgeynta ay u qaban karaan ganacsigaaga. Taabadalkeed, waa inaad isku daydaa inaad ogaatid sida ay u dabooli karaan baahida macaamiishaada. Si loo xoojiyo qadkaaga, isu keen iibintaada iyo kooxaha suuqgeynta si aad uhesho habab aad ku fulin karto codsiyada dhagaystayaashaada isla markaana aad xal ugu hesho qodobbada xanuunka.
Ma ogtahay in 60% ilaa 70% dhamaan agabka suuq geynta ee la abuuray aan la isticmaalin? Taasi waa sababta oo ah, haddii aadan shaqeeyn xeelado caqli-gal ah, dadka abuuraya waxyaabaha ku jira waaxdaada suuq-geynta ma fahmayaan waxa ay dadka wax iibiya u baahan yihiin.
Waa wax walba oo ku saabsan tababar weyn, qalab heer caalami ah iyo geeddi-socod, iyo rabitaan ah inaad beddesho sidaad had iyo jeer wax u qabatay ee horumarinta ganacsigaaga. Kooxdayada ka tirsan ServiceSource waa hogaamiyaasha xallinta dibedda ee shirkadaha, si ay ula xiriiraan khabiir nagula soo xiriir maanta.
Tags: isku xirkainfographicisku waafajinta suuq geyntaisku waafajinta iibkaiibinta iyo suuqgeyntaiswaafajinta iibka iyo suuq geyntaadeegyadasmarketing